‘क्यासिनो सिटी’मा आउन थाले ‘बलिउड’ कलाकार ! (महक चहलको तस्विर सहित) - Arthapage
‘क्यासिनो सिटी’मा आउन थाले ‘बलिउड’ कलाकार ! (महक चहलको तस्विर सहित)
नेपालगञ्ज २३ पुस – ‘क्यासिनो सिटी’ का रुपमा चिनिदै गएको नेपालगञ्जमा ‘बलिउड’ कलाकारका बिशेष प्रस्तुती हुन थालेका छन् । यहाँ खुलेका क्यासिनोमा भारतीयहरु आउने गरेकाले उनीहरुलाई आर्कषित गर्न भारतीय कलाकार ल्याउने गरिएको छ ।
होटल सोल्टीमा हालै खुलेको क्यासिनो महाजोङ्गमा चर्चित भारतीय कलाकार सपना चौधरी आइन । नयाँ वर्षको ‘इभ’ मा महेक चाहलले बिशेष प्रस्तुती दिइन । महक चहल एक भारतीय नोर्वेली बलिउड अभिनेत्री हुन् । उनी आज सम्म धेरै हिन्दी, तेलुगू, बङ्गाली, पञ्जाबी र नोर्वेली आदि भाषाहरूको चलचित्रमा कार्य गरि सकेकी छिन् ।
यस बाहेक धेरै धारावाहिकहरूमा (सिरिअल) पनि कार्य गरेकी छिन् । उनी सबैभन्दा पहिले सीआईडी नामक धारावाहिकमा देखा परिन् जसमा उनी वांटेड फिल्मको प्रचारको लिए आएकी थिइन् । यस पश्चात उनी बिग बसको बिग बस ५मा पनि थिइन् र बिग बस ८मा एक दावेदारको रूपमा प्रवेश गरिन् ।
नेपालगञ्जमा मिनि क्यासिनो, क्यासिनो ज्याकपट सहित लाइभ क्यासिनो महाजोङ्ग रहेका छन् । थप तारे होटलमा क्यासिनो खुल्ने सम्भावना रहेको छ । भारतीयलाई आर्कषित गर्दै यहाँ होटलमा क्यासिनो खुल्ने क्रम बढेको छ ।
प्रकाशित मितिः 7:19:32 AM |
Prevराझा पुग्यो प्रजातान्त्रिक प्यानल
Nextकर्णालीका ४० वडालाई जडीबुटी जोन बनाइदैं